Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zaseUganda zokuhamba » I-Uganda iqhuba ugonyo olukhulu lwe-COVID-19
Njengokuba iicogs zecandelo lezokhenketho lihamba kancinci kodwa ngokuthe chu liqala ukujika, abathathi-nxaxheba abavela kwicandelo lezokhenketho laseUganda banqwenela ukubuyela kwiintsuku zaphambi kobhubhane bathathe amanyathelo obuchule kwilinge lokuvuselela icandelo.
Iinkampani zabucala ezininzi kunye nemibutho zidibene ndawonye ukuseta ugonyo olukhulu lokuqhuba e-Uganda.
Ukongeza, iinkqubo zokuvavanywa kwe-coronavirus ziyaqiniswa kwaye zilungelelaniswe.
Abahambi abagonywe ngokupheleleyo xa bebonisa ubungqina banokuxolelwa kuvavanyo xa befika.
Oku kwenzeka ngelixa iSebe lezeMpilo (MOH) lihlaziya impendulo yalo kwizikhokelo zobhubhane ze-COVID-19 ezithiwe thaca nguGqirha Henry G. Mwebesa, uMlawuli Jikelele weeNkonzo zezeMpilo, MOH, ngoMeyi 27, 2021.
Ukukhokelwa ngumzekelo, i Umbutho wabasebenza abakhenkethi eUganda (AUTO)I-Uganda Guides Association (UGA), i-Uganda Safari Guides Association (i-USAGA), iBhodi yezoKhenketho yase-Uganda (UTB), kunye ne-Uganda Wildlife Authority (UWA) baqalisa iphulo elikhulu lokugonya eMyuziyam yase-Uganda eKampala ukusukela nge-2 ukuya ku-4, 2021. Ngokusondela kwemini, abantu abangama-330 babefumene le jab.
Icandelo loMphathiswa Wezempilo lisayine iMemorandam yokuQondana noMbutho waseUganda abaSebenzi boKhenketho ukuze benze uvavanyo lwesampulu ngendlela ebhetyebhetye kwaye babuyisele iziphumo kubaxumi babo kwiyure yovavanyo ngokuchasene neeyure ezi-4 ezifunekayo. Ngokuka Sihlalo we-AUTO, u-Civy Tumusime, kulandela uthotho lweentlanganiso kunye ne-MOH, izithuthi zinokuphinda zithathe abathengi bazo kwizithuthi zenkampani ngokuchasene nokubakhwela ezibhasini nabanye abahambi, ukubavavanya, nokubadlulisela kwiihotele zabo apho unokukhawulezisa iziphumo.
Abanye abahambi abavela kudidi loku-1 kunye namazwe ama-2 kubandakanya abantwana kufuneka bathunyelwe ngebhasi baye kwiPeniel Beach Hotel ebekwe kwi-2 km kude apho ukususwa kwesampulu kunye nokuvavanywa kwenziwa khona.